Geetha Govindam (2018) | MM Movie Store
အိန်ဒိယကားကောငျးကောငျးလေးတှေ တောငျးတနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျအလနျးစား တောငျပိုငျးကားတဈကား တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
Hello (2017), Hello Guru Prema Kosame (2018) တို့လို Drama, Romance ကားကောငျးတဈကားဆိုလညျး မမှားပါဘူးမငျးသားကလညျး လောလောလတျလတျ ကတငျပေးထားတဲ့ Taxiwaala ထဲကမငျးသားခြော Vijay Deverakona ပဲဖွဈပါတယျ
ကွညျ့ဖူးနကြေ တောငျပိုငျးကားတှလေိုမဟုတျဘဲ အိုဗာအကျတငျတှေ လုံးဝကငျးတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပါဇာတျလမျးလေးကတော့ ငယျငယျကတညျးက မိခငျဆုံးပါးသှားလို့ အဖတေဈယောကျတညျးရဲ့ အုပျထိနျးမှုဖွငျ့ကွီးပငျးခဲ့တဲ့ ဗီဂြေး အသကျရှယျ ၂၅ နှဈအရှယျလူပြိုတဈယောကျ
မိနျးကလေးတှနေဲ့ပတျသတျရငျ ဘာအတှအေ့ကွုံမှမရှိဘဲ ရညျးစားရဖို့နနေသောသာမိနျးကလေးတဈယောကျကိုတောငျ မပိုးမပမျးတတျသူတခွားသူတှနေဲ့မတူဘဲ အိမျထောငျရေးနဲ့ပတျသတျလို့အခဈြရေးနဲ့ပတျသတျလို့ဇနီးမယားဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတျသတျလို့ စိတျကူးယာဉျဆနျလှနျးသူငါသာ ရညျးစားထားရငျ ဘယျမိနျးကလေးမြိုးနဲ့မှအိမျထောငျပွုရငျ ဘယျလိုမိနျးကလေးကိုပဲ
အိမျထောငျပွုမှာ စဖွငျ့ရှေးဆနျတဲ့အတှေးအချေါတှေ တပွုံတပိုကျနဲ့ဘယျလောကျထိ မိနျးကလေးတှနေဲ့ပတျသတျပွီး အတှကွေုံ့နညျးလဲဆိုရငျစိတျဝငျစားလို့ ၆ လလောကျပတျလိုကျခဲ့တဲ့ မိနျးကလေးက အိမျထောငျသညျဖွဈနမှေနျး မသိရှာဘူးအဲ့လောကျထိအဲ့ဒိလို ဗီဂြေးတဈယောကျ
တနမှေ့ာ အငျမတနျခဈြရမယျ့ ဂီသားဆုတဲ့မိနျးကလေးနဲ့ဆုံစညျးခဲ့ပါတယျသူ့ရဲ့အလှဲလှဲအခြျောခြျောတှနေဲ့ အယူအဆတှနေဲ့ ဂီသားနဲ့ ဗီဂြေး ပေါငျးစညျးခှငျ့ရမလားဆိုတာကိုတော့ ….
အိန္ဒိယကားကောင်းကောင်းလေးတွေ တောင်းတနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်အလန်းစား တောင်ပိုင်းကားတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
Hello (2017), Hello Guru Prema Kosame (2018) တို့လို Drama, Romance ကားကောင်းတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူးမင်းသားကလည်း လောလောလတ်လတ် ကတင်ပေးထားတဲ့ Taxiwaala ထဲကမင်းသားချော Vijay Deverakona ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကြည့်ဖူးနေကျ တောင်ပိုင်းကားတွေလိုမဟုတ်ဘဲ အိုဗာအက်တင်တွေ လုံးဝကင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိခင်ဆုံးပါးသွားလို့ အဖေတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုဖြင့်ကြီးပင်းခဲ့တဲ့ ဗီဂျေး အသက်ရွယ် ၂၅ နှစ်အရွယ်လူပျိုတစ်ယောက်
မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ရင် ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘဲ ရည်းစားရဖို့နေနေသာသာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် မပိုးမပမ်းတတ်သူတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ဇနီးမယားဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သတ်လို့ စိတ်ကူးယာဉ်ဆန်လွန်းသူငါသာ ရည်းစားထားရင် ဘယ်မိန်းကလေးမျိုးနဲ့မှအိမ်ထောင်ပြုရင် ဘယ်လိုမိန်းကလေးကိုပဲ
အိမ်ထောင်ပြုမှာ စဖြင့်ရှေးဆန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ တပြုံတပိုက်နဲ့ဘယ်လောက်ထိ မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတွေ့ကြုံနည်းလဲဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလို့ ၆ လလောက်ပတ်လိုက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးက အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်နေမှန်း မသိရှာဘူးအဲ့လောက်ထိအဲ့ဒိလို ဗီဂျေးတစ်ယောက်
တနေ့မှာ အင်မတန်ချစ်ရမယ့် ဂီသားဆုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေနဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ဂီသားနဲ့ ဗီဂျေး ပေါင်းစည်းခွင့်ရမလားဆိုတာကိုတော့ ….
Under World (2003)